Degmada Dhanaan Oo Lagu Qabtay Shir Wacyigalinta Dakhiga Ah - Cakaara News
Degmada Dhanaan Oo Lagu Qabtay Shir Wacyigalinta Dakhiga Ah
Dhanaan(cakaaranews)Isniin 22ka August 2016. Shir ay kasoo qaybgaleen dhamaan ganacsatada iyo waxgaradka kudhaqan degmada dhanaan islamarkaana ujeedadiisu ahayd wacyigalinta arimaha Dakhliga iyo waliba tababar kusaabsan bayaaaanka cusub ee dakhliga ayaa si habsami leh uga dhacay degmada dhanaan ee Gobolka Shabeele.
Hadaba, shirkan ayaa waxaa furitaankiisii kahadlay kusimaha Gudoomiyaha ahna Madaxa Xafiiska Caafimaadka Degmada Dhamaan mudane Maxamed Aadan Daahir oo sheegay in shirkani yahay shir kusaabsan wacyigalinta arimaha dakhliga iyo waliba sidii bulshada kudhaqan degmada dhamaan fahan buuxa looga siin lahaa bayaanka cusub ee dakhliga.
Shirkan ayaa waxaa isna dhankiisa qudbad muhiim ah kasoojediyay maareeyaha wakaalada dakhliga degmada dhanaan mudane Cabdijabaar Maxamuud Maxamed oo sheegay in shirkan isugujira wacyigalinta iyo tababarka uu yahay mid ganacsatada iyo dhamaan canshuur bixiyayashaba u ah faaiido islamarkaana ay fahan buuxa kaga qaadanayaan bayaanka cusub ee dakhliga kaasoo larabo in loo sii dhaadhiciyo bulshada kudhaqan ilaa heer tuulo. Wuxuuna maareeyuhu u mahadceliyay dhamaan kasoo qaybgalayaasha shirkan.
Sidookale waxaa isna kahadlay shirkan Madaxa Xafiiska Biyaha Degmada Dhanaan mudane Cabdirisaaq Maxamed Mursal oo sheegay in shirkani yahay mid lagu sii xoojinayo iskuxidhnaanta bulshada iyo maamulka degmada ee ku aadan dhinacyada dakhliga. Wuxuuna xusay in dakhiga oo lagaqaybqaato ay tahay horumarka oo aad kaqaybqaadatay. Islamarkaana uusan horumarku jiraynin hadii uusan dakhli jirin.
Ugudanbayna waxaa dareenkooda kahadlay kaqaybgalaaysha shirka oo sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin sida quruxdabadan ee loogu soo bandhigay bayaanka cusub ee dakhliga iyo wacyigalinta lasiiyay waxayna sheegeen inay balanqaadayaan kashaqaynta iyo siigaadhsiinta bulshada qaybaheeda kale.